netzay.com.mm : Myanmar Online Shopping, Shopping Websites:Transcend
TRANSCEND အမှတ်တံဆိပ် Electronicပစ္စည်းများကို NetZay.com.mm မှ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ Shwe Lamin Ngar Group Company ကို ၂၀၁၄ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် Shwe Lamin Ngar Co.,ltd နှင့်Royal Smart Co.,Ltd တို့ပူးပေါင်းပြီးစတင်တည်ထောင်ခဲ့ သည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် Royal Smart Company သည် MSI Brand အား ကိုယ်စားလှယ့် အဖြစ် ဖြန့် ဖြူးရောင်းချခွင့် နှင့် ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် HP အမှတ်တံဆိပ် ထုတ်ကုန်များကိုလည်း ကိုယ်စားလှယ့် အဖြစ် ဖြန့် ဖြူးရောင်းချခွင့် ရရှိခဲ့သည်။၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် Acer Co.,Ltd မှလည်း Shwe Lamin Ngar Company သည် သူဧ။် ကုန်ပစ္စည်း များအား ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဖြန့် ဖြူးရောင်းချသူ ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။ထို့ နောက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် TranscendProductsများကိုလည်းကောင်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Gamdias product များကို လည်းကောင်း ဖြန့် ဖြူးရောင်းချခွင့် ရရှိခဲ့သည်။
Transcend Car Video Recorder (Drive Pro 230)
Transcend ရဲ့ Car Video Recorder (Drive Pro 230) က သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး အားထားရမယ့် လမ်းပေါ်ကမျက်မြင်သက်သေတစ်ယောက် ဖြစ်စေမှာပါ။ သင့်ရဲ့ ကားမှာ Transcend ရဲ့ Car Video Recorder (Drive Pro 230) ကို တပ်ဆင်ထားရုံပါပဲ။ ကားစက်နှိုးတာနဲ့ Auto Power On ၍ စတင် Record လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး Li-Polymer Built-in Battery ပါဝင်တဲ့ Drive Pro 230 ဟာကားစက်ရပ်သွားတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတောင် record လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Drive Pro 230 မှာပါဝင်တဲ့ Sony Exmor sensor က ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ရုပ်ပုံတွေကိုဖမ်းယူပေးနိုင်ပြီး အလင်းသိပ်မရှိတဲ့နေရာမှာတောင် ပုံတွေကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာဖမ်းယူပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Wide Dynamic Range(WDR) နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက် ဖမ်းယူထားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ကြည်လင်သမျကြည်လင်နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တော့ Drive Pro 230 မှာပါဝင်တဲ့ GPS Receiver က သင့်ကား မတော်တဆဖြစ်ခဲ့ရင် သင့်ကားရဲ့တည်နေရာကိုညွှန်ပြပေးနိုင်တဲ့အတွက် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကို သင့်ဆီကိုအမြန်ဆုံးရောက်အောင် ကူညီပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Drive Pro 230 ရဲ့ အရည်အသွေး မြင့်မားပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့ မှန်ဘီလူးတွေက Snapshots feature ကို ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး တောက်ပတဲ့ 2.4” color LCD screen နဲ့ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ Full HD display ကိုလည်း တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ G-sensor ပါဝင်တဲ့အတွက်လည်း တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ရဲ့ကားကိုထိခိုက်လာစေခဲ့ရင် သင်သိနိုင်မှာပါ။ အသုံးပြုရတာလွယ်ကူတဲ့ Transcend ရဲ့ Drive Pro 230 မှာ Auto Power On-Off feature ပါဝင်တဲ့အပြင် Record လုပ်ထားတဲ့ Video တွေကို သင့် Computer မှာ လွယ်ကူစွာ ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ (DrivePro PC Tool for Window) ကိုလည်း အခမဲ့ လွယ်ကူစွာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။ Warranty အနေနဲ့2Years ပေးထားပြီး 16GB Class-10 Micro SD တစ်ကတ်လည်း လက်ဆောင်ထည့်ပေးထားတာမို့ သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးနဲ့ အရွေးချယ်သင့်ဆုံး Device လေးတစ်ခုဖြစ်စေမှာပါ။
Transcend TS-RDF9K Multi Card Reader
Compatible with : SD/SDHC(UHS-I/II)/SDXC(UHS-I/II)/microSD/microSDHC (UHS-I) CompactFlash/ Memory Stick
Transfer Speed : USB 3.1,3.0
Transcend TS-RDP8K/W Mini Card Reader
Compatible with : SD/SDHC/SDXC/MMC/Memory StickmicroSD/microSDHC/CompactFlash
Transfer Rate : USB 2.0
Transcend Portable DVD writer : Extra Slim
Original Price - 28$
-Size : 142.8mm x 148.0mm x 13.9mm (5.62" x 5.83" x 0.55")
-Weight : 264g (9.31 oz)
-Drive Type : 9.5mm internal, Tray-Loading
-Buffer Memory : 0.75MB
-Average Seek Time : DVD-ROM – 160ms , CD-ROM – 140ms
-Operating Voltage : 5V
-Operating Temperature : 5°C (41°F)~40°C (104°F)
-Size : 32mm x 24mm x 2.1mm (1.26" x 0.94" x 0.08")
-Weight : 2g (0.07oz)
-Op. Voltage : 2.7V~3.6V
-Op. Temperature : -25°C (-13°F) ~ 85°C (185°F)(SDHC card)
-Durability : 10,000 insertion/removal cycles
Transcend SD Card Class 4
Transcend Micro-SD Class 10(With Adapter)
-Size : 11mm x 15mm x 1mm (0.43" x 0.59" x 0.04")
-Weight : 0.4g (0.01oz)
-Op. Temperature : -25°C (-13°F) ~ 85°C (185°F)
Transcend Micro-SD Class 4(With Adapter)
Transcend Micro-SD Class4(Without Adapter)
Transcend JetFlashV70 (32 GB)
-Size : 63mm x 22mm x 10.5mm (2.48" x 0.87" x 0.41")
-Weight : 15g (0.48oz)
Transcend JetFlashV70 (16 GB)
Transcend JetFlashV70 (8 GB)
Transcend JetFlash520S (16 GB)
-Size : 37.3mm x 12.2mm x 4.5mm
-Weight : 5.3g
Transcend JetFlash520S (8 GB)
Transcend JetFlash510S (16 GB)
-Size : 21.8mm x 12.2mm x 4.55mm
-Weight : 2.7g
Transcend JetFlash510S (8 GB)
Transcend JetFlash320 (16 GB)
-Size : 50.4mm x 17.0mm x 7.4mm
-Weight : 7g
Min: 7,918(Ks) Max: 732,990(Ks)
All Car Recorder Card Reader DVD Hard Disk Micro SD Card OTG USB Flash Drive
All Electronic အခြားပစ္စည်းများ
All Black White Cyan Gold Silver Red Blue Yellow
All4GB 8 GB 16 GB 32 GB 8GB 16GB 32GB 64GB